A look at Zimbabwe’s first lady, who is accused of assault - The Philadelphia Sunday Sun
ABOVE PHOTO: Zimbabwe’s first lady, Grace Mugabe, greets supporters at a rally in Zimbabwe. South Africa’s police minister says the wife of Zimbabwe’s president, background image, has handed herself over to police after being accused of assaulting a young woman Sunday night. (AP Photo/Tsvangirayi Mukwazhi, File)
JOHANNESBURG — A South African model’s claims of assault have drawn attention to Zimbabwe’s increasingly outspoken first lady Grace Mugabe, who has been viewed as a possible successor to her 93-year-old husband. Grace and President Robert Mugabe returned to Zimbabwe Sunday, despite calls by a South African legal group and protesters for the Zimbabwean first lady to be denied diplomatic immunity.
Grace Mugabe returned to Zimbabwe Sunday morning with her husband, who had attended a regional summit in South Africa.
Zimbabwe’s state-owned broadcaster showed them being greeted at Harare International Airport by government and military officials.
Zimbabwe calm as Mugabe is urged to step down peacefully Music mogul Diddy accused of assault with workout equipment No Riches, But Respect For Zimbabwe Soccer Team At Olympics